DAAWO: Weerarakii Maanta Shabaabka ay ku Qaadeen Xarunta Ciidamada Jabuuti ee Magaalada Baledweyne - Hablaha Media Network
DAAWO: Weerarakii Maanta Shabaabka ay ku Qaadeen Xarunta Ciidamada Jabuuti ee Magaalada Baledweyne
HMN:- Waxa ay Warar dheeraad ahi kasoo baxayaan qarax ismiidaamin ah oo maanta ay dagaalyahanada Al shabaab ay ku qaadeen saldhig ay Ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa dalka Jabuuti ku leeyihiin Xaafada Howl-Wadaag ee galbeedka magaalada Baladweyne.
Weerarakani ayaa waxaa loo adeegsaday gaari nuuca xamuulka ah, oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa, waxaana gaarigani oo si xowli ah ku socday ayaa ku hor qarxay afaafka hore ee saldhig ciidamada AMISOM ku leeyihiin Xaafada Howl-Wadaag.
Afhayeen u hadlay maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in qaraxaasi ay wax ku noqdeen askar Jabuutiyaan ah laakiin ilaa iyo hadda aysan sheegi karin tirada dhimshada iyo dhaawaca, waxa uuna intaa raaciyay in qaraxaasi ay ciidamada ka hor tageen, una dhicin sidii loo soo qorsheeyay.
Quwada firirka qaraxan oo ahaa mid aad u xoogan, ayaa gaaray xaafado ku dhaw dhaw xarunta uu qaraxu ka dhacay, waxaana dad shacab ah oo ku dhaawacmay qaraxaasi la dhigay isbitaalka guud ee magaalada Baladweyne.
Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarkii ismiidaaminta ahaa ee maanta lagu qaaday ciidamada AMISOM ee ku sugan Badalweyne, waxana ay sheegatay in ay weerarkaasi ay ku dileen askar badan oo Xeradaasi ku sugnaa.